RSS लाई WordPress समाधानको लागि ईमेल समाधान
सोमबार, जनवरी 10, 2011 शुक्रबार, मार्च 1, 2013 Douglas Karr
मेरो अभियान प्रो र सहकर्मी बिल डासनले हाम्रो नयाँ सेट अप गरे साप्ताहिक न्यूजलेटर त्यो आज मात्र लात मारिएको थियो। (यदि तपाईंले सदस्यता लिनु भएको छैन भने, तपाईं पुरस्कारमा in १२,००० भन्दा बढी मिस गर्दै हुनुहुन्छ ... र बढ्दै!)।
यसलाई सजिलो बनाउनको लागि, मेरो अभियान प्रोको ल्यूक न्यूटन, प्रणाली भित्र टेम्प्लेट सेटअप गर्दछ जसले वेबको जुनसुकै ठाउँबाट HTML लाई समातिन्छ - कि त फिड वा डाईनेमिक HTML पृष्ठको साथ। यसलाई उसको प्रणालीमा स्निपेट भनिन्छ र यो बचत गरिएको सामग्रीमा देखाउन सकिन्छ, गतिशील सामग्री हुन सक्छ, वा आरएसएसबाट वा वेब पृष्ठबाट तान्न सक्छ:
अर्को चरण भनेको प्रतिस्थापन स्ट्रि usingको प्रयोग गरेर ईमेल टेम्प्लेटको HTML भित्रको स्निपेटलाई सन्दर्भित गर्नु हो।
त्यसो भए बिलले वर्डप्रेस भनिने एक वर्ग भित्र प्रोग्राम गर्यो समाचार पत्र त्यो केवल लुकेको आन्तरिक पृष्ठमा प्रदर्शित हुन्छ र ब्लगमा कुनै पनि पोष्टहरूबाट हटाइन्छ। WordPress मा, यो लुपको माथि केहि क्वेरी तत्वहरू थपेर गरिन्छ:
क्वेरी_पोस्ट्स ($ क्वेरी_स्ट्रिring। '& बिरालो = -4835');
हामीले क्वेस्ट्रिringमा पूरा भएका कुनै पनि पोष्टहरू हटाउन फिड पनि अपडेट गर्‍यौं।
किन यो महान् छ? प्रत्येक हप्ता, म केवल न्यूजलेटर कोटिमा ब्लग पोष्ट लेखिरहेछु र त्यसपछि पठाउन अभियान कार्यान्वयन गर्दैछु। प्रणालीले स्वचालित रूपमा अनुकूलन पृष्ठबाट सामग्री स्क्र्याप गर्दछ (साथै मेरो ट्विटर फिड पनि) र ईमेल उत्पन्न र पठाइन्छ। न केवल यो महान हो कि मलाई मात्र WordPress भित्रै सामग्री लेख्ने बारे चिन्ता लाग्छ ... मसँग मेरो सबै ईमेलहरूको प्रतिलिपि पनि पठाइएको थियो!
लुक समर्थनको साथ दुई वार्षिक लाइसेन्स (2०० सम्म पठाइएको ईमेल सहित) प्रदान गर्दैछन - त्यसैले साइन अप गर्न निश्चित हुनुहोस् मार्केटिंग टेक्नोलोजी न्यूजलेटर जित्ने मौकाको लागि!
टैग: ब्लग न्यूजलेटरईमेलमा ब्लगइमेल मार्केटिङ
टेक्नोलोजी मार्केटिंग: एप्पल फार्मुला
जनवरी १, २०१ 10 १२::2011 अपराह्न
डग पोस्टका लागि धन्यबाद! हामी नयाँ न्यूजलेटरको बारेमा धेरै उत्साहित छौं र यसको हिस्सा हुन पाएकोमा गर्व गर्दछौं!
हामीले पत्ता लगायौं कि यो भारी वर्डप्रेस प्रयोगकर्ताहरूको लागि सामग्रीहरू सिर्जना गर्न र यसलाई सबै एकै ठाउँमा राख्नको लागि उनीहरूको मनपर्ने आधिकारिक इञ्जिन प्रयोग गर्न जारी राख्नको लागि एक उत्तम तरिका हो।
वास्तविक शक्ति वर्डप्रेसमा ईमेलमा उपलब्ध स्वचालनको समान स्तर ल्याउने क्षमतामा छ। केवल सामग्रीमा तान्नुहोस् र थोरै चलिरहेको रखरखावको साथ अत्यधिक स्वचालित ईमेल श्रृंखलाको लागि नियमित तालिका पठाउनुहोस्। कुनै थप प्रतिलिपि र टाँस्न - मात्र एक पटक यो निर्माण र स्वचालित!
र वर्डप्रेसमा समावेश सबै सामग्रीको साथ - ईमेलको बाहिर त्यो सामग्री वितरण गर्न सजिलो हुन्छ।
यदि तपाइँ एक वर्डप्रेस प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ - मात्र यसलाई यस तरिकाले गर्न बुझेको छ!
साथै - हामी प्रतियोगितामा भाग लिने सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छौं - हामी २,2,500०० औं पोस्ट उत्सवको हिस्सा हुन पाउँदा धेरै उत्साहित छौं!